SALAMO 61.1-8	F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 61.1-8	F. 2
Any am-paran’ny tany. Mahatsiaro fahoriana mafy i Davida fa lavitra an’Andriamanitra. “Reraka ny foko” hoy izy. Mety mandalo fangidiana sy fahoriana lalina ary fitsapana mahamay tahaka an’i Davida koa isika. Fantatsika fa “vatolampy avo” Andriamanitra, “fiarovana azo antoka” (aroko Ianao), ary “tilikambo mafy”, maniry isika hahatsapa ny fiadanan’ny fanatrehany manodidina antsika (4). Saingy misy fotoana toa tsy mahatsapa izany isika fa toa lavitra be sady tsy azo tratrarina akory izany. Amin’izay indrindra no fotoana tsara iantsoantsika an’Andriamanitra toy ny ataon’i Davida eto : “Henoy ny fitarainako Andriamanitra ô! Ento aho ho any amin’ny vatolampy izay avo ka tsy tratro” (1-2)
Fa Ianao Andriamanitra ô! (5) Ny famindrampon’Andriamanitra irery ihany no antoka hihainoany ny vavaka ataontsika sy handraisantsika valim-bavaka ary hahatonga antsika ho mpandova Azy sy mpiray lova amin’i Kristy (Romana 8.17). Ny fahazoana antoka izany no nahatonga ny mpanao salamo nangataka zavatra lehibe kokoa (6-7) : fanalavana ny andron’ny mpanjaka, ny hitoeran’ny fanjakany eo anatrehan’Andriamanitra mandrakizay sady feno ny famindrampo sy fahamarinana.
Valim-bavaka. Jesosy Kristy, Ilay Mesia efa nampanantenaina, no fahatanterahan’io fangatahana io. Izy, ilay “Mpanjakan’ny Jiosy” (Marka 15.26) no mipetraka mandrakizay eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra, maneho ny hery sy ny fahatsaran’Andriamanitra, sady mifona ho antsika (Romana 8.34).
Ahoana no tohiny? Davida nivoady hankalaza an’Andriamanitra isan’andro. Notanterahany izany na tsara na ratsy ny zava-nitranga teo amin’ny fiainany.
Fampiharana : satria efa manjaka ny Mesia, ankalazao Andriamanitra ary tanteraho an- kafaliana sy amin’ny zoto-po isan’andro izay fanekena ataonao amin’Andriamanitra (8).